Raphaël Varane oo ka hadlay kulanka la wada sugayo ay Man City ku booqanayaan garoonka Etihad - Hargeele - Wararka Somali State
(Madrid) 01 Agoosto 2020. Daafaca reer France iyo kooxda Real Madrid ee Raphaël Varane ayaa ka hadlay kulanka lugta labaad ee wareega 16-ka tartanka Champions League ay kooxdiisa kula ciyaari doonto garoonka Etihad naadiga Manchester City.
Real Madrid ayaa kulankii lugta hore ee ka dhacay garoonka Santiago Bernabeu waxay guuldarro 1-2 ah kala kulantay Manchester City, sidaas darteed waxay u baahan tahay in kulanka Jimcaha soo socda ay guul ku gaarto 0-2 si ay ugu gudubto wareeaga xiga ee siddeeda.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Raphaël Varane, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Kulanka Manchester City? Waxaan heysanaa khibrado badan oo aan ku xallin karno kulamada noocaan oo kale ee waa weyn, sidaas darteed waxaan dareemi karnaa xasillooni”.
“Waxaan go’aan ka gaarnaa kulamada sida ay kooxda markii horeyba aheyd, guusha mar walba waa ujeedkeena iyo qeyb ka mid ah DNA-ga kooxdan”.
“Waxaan u diyaar garoobeynaa kulanka soo socda, waxaana qaban doonaa wixii aan awoodno, sida aan xilli kasta ka sameyno tartankan”.
“Saamaynta Zidane? Waxay nagu soo kordhineysaa kalsooni iyo deganaan, taasina waa muhiim, sababtoo ah wuu i caawiyaa wuxuuna i siiyaa talooyin”.
“Benzema? Wuxuu ku jiraa xaalad aad u wanaagsan, layaab iguma ahan, sababtoo ah qof kasta wuxuu garanayaa tayadiisa, wuxuu ku raaxeysanayaa kalsooni weyn, isagu waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican”.
Luís Nani oo shaaca ka qaaday halka uu ku sii jeedo Cristiano Ronaldo